​विदेशमा गएर फर्केकाले घर आएपछि के गर्लान् ?
कावासोती । विदेशमा गएर फर्केकाले घर आएपछि के गर्लान् भन्दा धेरैको जवाफ आउछ रु घरघडेरी जोड्ने, सुखसँग जिन्दगी बिताउने। तर योभन्दा भिन्न छन् इजरायलमा ११ महिना काम गरेर फर्केका कुमारवर्ती–६..
​२९ करोडको लागतमा सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता
इलाम । इलामको दक्षिणी महमाई गाविसमा करिब २९ करोडको लागतमा सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सिँचाइ नहर बन्ने भएपछि सिँचाइको समस्या झेल्दै आएका यहाँका किसानले सुविधा पाउने भएका..
​कृषिको विकास गर्न १८५ स्थानलाई 'सुपर जोन' बनाउने
काठमाडौ। कृषि विकास मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि १८५ वटा विशेष क्षेत्र (सुपर जोन) स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा..
​कृषकहरुको विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदै, विश्वभरका कृषकहरु पहिलो पटक एउटै मंञ्चमा
काठमाडौं । काठमाडौंमा आउँदो जेठ २१ गतेदेखि पहिलो विश्व किसान सम्मेलन हुने भएको छ। २०७३ जेठ २१ गतेबाट सुरु हुने सम्मेलन जेठ २३ गतेसम्म चल्नेछ। पचासभन्दा बढी देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने..
​कृषि मन्त्री भन्छन् सरकारी कर्मचारीजस्तै कृषकलाई पनि पेन्सन दिने तर कहिलेदेखि दिन्छन् त पेन्सन ?
भद्रपुर । कृषि विकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले कृषकको भविष्यलाई सुरक्षित पार्न २० वर्षसम्म लगातार कृषि पेसा अँगाल्ने कृषकलाई राज्यबाट निवृत्त दिने व्यवस्था ल्याउन लागेको बताएका छन् । कृषि विकास कार्यालयद्वारा आयोजित..
​विदेशबाट रित्तो हात फर्किएर स्वदेशमा पशुपालन व्यवसाय गरी महिनामै लाखौं आम्दानी
पाल्पा । बौघापोखराथोकका कृषक रुकबहादुर रेश्मी साहुसँग दुई लाख रुपैयाँ ऋण गरेर बहराइन पुगे । दुई वर्ष त्यहाँ काम गर्दा ऋण तिर्न पनि उनलार्इ धौधौ प¥यो । मनग्य कमाइ गर्न त..
किसानलाई असल बाटो देखाउने ‘कृषि घर’ एप्स
नारायण ढुङ्गाना चितवन । चितवनको गीतानगरकी किसान सुनिता चापागार्इं एन्ड्रोइड मोबाइलबाट यसअघि फेसबुक धेरै चलाउँथिन्। अनि दोस्रोमा भाइबर तथा जिमेलमा उनको हात जान्थ्यो। बेलाबेलामा आफन्तसँग फोनमा कुराकानी मोबाइलबाट हुन्थ्यो। मनोरञ्जन लिन पनि..
​घाँसको बीउ बेचेरै वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी
डडेल्धुरा । जिल्लाका मष्टमाडौँ र नवदुर्गा गाविसमा नमुनाका रुपमा जयघाँस खेती सुरु गरिएको छ। घासँखेती सुरु भएसँगै यहाँका किसान यसतर्फ आर्कर्षित भएका छन्। किसानले घाँस र बीउबाट आम्दानी समेत गर्न थालेका..
​हावाहुरीले डुबायो केरा खेती गर्ने कृषकलाई
चितवन। चितवनमा सोमबार अपराह्न आएको हावाहुरीका कारण केराखेतीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चितवनको रत्ननगरसँगै चैनपुर, पिठुवा, पदमपुरलगायत क्षेत्रमा रहेका केरा बगानमा हावाहुरीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको चितवन केरा उत्पादक सङ्घका..
नेपालमै पहिलोपटक उखु खेतीमा ‘चिप कटर’ प्रविधि
कञ्चनपुर । नेपालमै पहिलो पटक उखु खेतीको बेर्ना तयार गर्नका लागि कञ्चनपुरको देखतभूली–६ तिलकीका कृषकले ‘चिप कटर’ प्रविधि भित्र्याएका छन् । प्रविधिअन्तर्गत उखुको आख्ला मेसिनको सहायताले काटी ग्रिनहाउसमा पोलिमर ब्यागमा राखी..
​हेम्जामा आलु महोत्सवको तयारी
पोखरा । आलुको पकेट क्षेत्र पोखराको हेम्जाका किसान सातौं आलु महोत्सवको तयारीमा जुटेका छन्। आफ्नो गाउँमा उत्पादन गरेको आलु घरआँगनबाटै बिक्री गरी हेम्जालाई आलु उत्पादन केन्द्रको रूपमा परिचित गराउने उद्देश्यले..
​देशकै मुख्यबालीमा पर्ने चैतेधान लोप हुँदै
सुशीला रेग्मी रामपुर । जिल्लाको दोस्रो मुख्य बाली मानिने धान बालीअन्तर्गत पर्ने चैतेधान लोप हुँदै गएको छ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु, कामदारका अभावका कारण चैतेधान जिल्लाबाट हराउँदै गएको हो। जिल्लाको मुख्य अन्न..
​दूधबाटै पैँतालीस लाख आम्दानी गरेपछि व्यावसायिक गाईभैँसीपालनतर्फ स्थानीय आकर्षित
म्याग्दी । जिल्लाको सिङ्गाका कृषकले दूध बेचेर गाउँमा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भित्र्याउने गरेका छन्। बेनी नगरपालिका १३ र १४ मा पर्ने सिङ्गाका कृषकले दूधबाट पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा पैँतालीस लाख..
​माओवादी पूर्वसभासदले ४० रोपनीमा ६० थरीका कृषि उपजको उत्पादन गर्दै
जाजरकोट । यहाँका पूर्वसभासद् भक्तबहादुर शाह बिहान उठ्ने बित्तिकै बारीमा जान्छन् । आफूले लगाएका विभिन्न खेतीको गोडमेल र सिँचाइमा व्यस्त हुन्छन् । हातमा कुटो, कोदालो र हैन्डपु्रनर लिएर बिरुवाको संरक्षण तथा..
​स्नातकोत्तर गरेपछि पशुपालनतर्फ लागे यादव
गोपालप्रसाद पोखरेल पथरी । विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र बोकेर जागिरका लागि युवायुवती धाउने प्रशस्त छन्। कुनै सरकारी तथा निजी संस्थामा जागिरका लागि सूचना गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै फारम भर्नेको भीड हुन्छ। समाजमा थोरै मात्रै यस्ता..
​दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानले गरे मिल चिनी उद्योगमा तालावन्दी
नवलपरासी । जिल्लाको गङ्गापुरस्थित इन्दिरा एग्रो एन्ड सुगर्स मिलमा किसानले अनिश्चितकालीन तालावन्दी गरेका छन्। समयमै मिलले उखुको भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानले सो उद्योगमा बिहीबारदेखि तालावन्दी गरेका हुन्। उखु कृषक समितिका अध्यक्ष..
​२३ मेट्रिक टन मकैको बीउ वितरण
वालिङ । स्याङ्जामा यस वर्ष मकै उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि मकै उत्पादक कृषकलाई नयाँ प्रजातिको बीउ वितरण सुरु गरिएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार स्याङ्जामा बृहत्तर मध्यपहाडी मकै उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत..
​आँपमा अत्यधिक फूल लागेपछि किसानहरु खुसी
सिरहा । आँप खेतीका लागि निकै प्रख्यात सिरहाका कृषकले रुखमा मन्जरी (फूल) अत्यधिक लागेको देखेर खुसीले गदगद् भएका छन् । आँपको राजधानी भनेर चिनिने सिरहामा यस वर्ष मनग्यै आँप फल्ने सङ्केत देखिएपछि..
​गोलभेँडाको उचित मूल्य नपाउँदा निरास
वीरगन्ज । व्यावसायिक रुपमा गोलभँेडा खेती गरेर खुसी भएका किसान यसको उचित मूल्य नपाउ“दा निरास भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा स्थानीय बजारमा गोलभेडाको मूल्य घटेको छ । घट्दो मूल्यका कारण..
नाकाबन्दीले पोल्ट्रीमा तीन अर्ब रुपैयाँ नोक्सान
चितवन । भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दी र बन्द, हड्तालले पोल्ट्रीजन्य क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ३१ करोड ७१ लाख बराबरको नोक्सान भएको छ । भूकम्पयता ब्रोइलर चल्ला, लेयर्स चल्ला, अण्डा, ब्रोइलर कुखुरा,..
​मकै मिसन कार्यक्रमका कृषकलाई नगद अनुदान
मोरङ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङले मकै मिसन कार्यक्रममा संलग्न कृषकलाई गाउँमै पुगेर नगद अनुदान वितरण गरेको छ । बुधनगर गाविसमा बसेर मकै उत्पादनमा सक्रियतापूर्वक लागिपरेका १२२ कृषकलाई जिल्ला कृषि..
​थोरै लगानीमा आकर्षक आम्दानी, ओखर उत्पादन बढ्यो
मुस्ताङ । जिल्लामा यसवर्ष ओखर उत्पादन पाँच प्रतिशतले बढेको छ । थोरै लगानीमा आकर्षक आम्दानी लिन सकिने ओखर खेतीतर्फ पछिल्लो समय जिल्लाका किसानको आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ । अहिले जिल्लाको..
​मौरीपालनले फेरियो महिलाको जीवनस्तर
चन्द्रकला भण्डारी झापा । एघार वर्ष अघि शिवसताक्षी–७ की देवीमाया दाहाल जीवन निर्वाहको अरु उपाय नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाउनुभयो । छिमेकी शिवमाया थेबेले ‘मौरीपालन गर न, किन जान्छौ दुःख..
​भुइँस्याउले बजार नपाउँदा कृषक चिन्तित
पर्वत । गतिलो आम्दानी गर्ने आशामा आलु र कोदोखेती छाडेर भुइँस्याउको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका यहाँका कृषक समस्यामा परेका छन् । उत्पादित भुइँस्याउले उचित मूल्य र बजार नपाउँदा उत्तरी पर्वतको लेखफाँट,..
​पन्ध्र सय बढी विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र बनाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ मुलुकभर एक हजार ५०० विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र बनाउने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न..
गाउँमा जग्गा जमिन बाँझै छोडी सहरमा रमाए ग्रामीण जनता
काठमाडौँ । ‘षानी भएका ठाउँमा गाउँ भयापनि गाउँ अरु जग्गामा सारिकन पनि षानी चलाउनु, षेत बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी षेत बनाई आवाद गर्नु,..
​दुई करोडको लागतमा चिस्यान केन्द्र स्थापना
तनहुँ । दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले ब्यास नगरपालिका– ३ स्थित रानीगाउँमा रु दुई करोडको लागतमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । तनहुँ, लम्जुङ र गोरखाका दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई लक्षित गरी उक्त..
​तीन वर्षभित्र मुलुकलाई अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने
काठमाडौँ । आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी प्रयास प्रारम्भ भएको छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आज ४० बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै पशुपक्षीजन्य पदार्थको आयातप्रतिस्थापन गरी..
मौरीपालनले जीनवशैली परिवर्तन : एकै वर्षमा १४ क्विन्टल मह उत्पादन गर्दछन राई
विराटनगर । मोरङको लेटाङ भोगटेनी–६ का कमल राई मौरीपालनलाई व्यावसायिक रुपमा अङ्गालेपछि उहाँको जीवनशैली नै फेरिएको छ । मौरी व्यवसायबाट बर्सेनि सरदर रु पाँच लाख आम्दानी भएपछि उहाँको जीवनशैली नै फेरिएको..
तरकारी राम्रो मूल्य नपाउँदा किसान निरास
वीरगन्ज । तरकारी उत्पादनमा वृद्धि भएपछि खुसी भएका किसान लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा निरास भएका छन् । बारा र पर्साका किसानले काउली खेतबाट बजारसम्म पु¥याउँदासम्मको ज्यालासमेत नउठेपछि खेतबारीमै तरकारी नष्ट गर्नु..
Results 344: You are at page5of 12